Shina vovo-tany mika vita amin'ny mika sy mpamatsy | Huajing
Wet Mica (Fitaovana ampiasaina)
Wet Mica Material Fitaovana ampiasaina）
W-100 White Silver F8 125 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 tsy misy ＜ 10ppm 0.22
W-200 White Silver F8 70 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 tsy misy ＜ 10ppm 0.19
W-400 White Silver F. 83 46 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 tsy misy ＜ 10ppm 0.16
W-600 White Silver Fandraisana Fitadiavana 23 ＞ 99.7 ＜ 100 ＜ 0,5 4.5 ～ 5.5 7.8 tsy misy ＜ 10ppm 0.12
48,5 ~ 50% 30 ~ 34% 8,5 ~ 9.8% 0.6 ~ 0.7% 0,53 ~ 0,81% 0.4 ~ 0.6% 0.8 ~ 0.9% 1.5 ~ 4,5% 7.8
Main Function Of Mika
Vovoka mika ambaratonga Huajing, izay ampiasaina indrindra amin'ny plastika injeniera mba hampitombo ny modulus miondrika sy ny fahalalahana; Ao amin'ny sehatry ny kojakoja plastika vita amin'ny vokatra elektronika, aorian'ny fampidirana mika dia mety ho voadio miaraka amina endrika izy ireo. afaka manatsara ny fanoherana ny toetr'andro amin'ny vokatra plastika izy io, ka ny plastika injeniera dia mahazaka hafanana sy fahasamihafana eo amin'ny tontolo iainana; manatsara be ny insulation mba hiantohana ny fahamendrehan'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra avo lenta; Izy io dia afaka manatsara ny fihenan'ny vokatra plastika manokana ihany koa.
Ny vovoka mika amin'ny tany lena dia ampiasaina hanadiovana akora misy rano sy hikosehana rano ho mpanelanelana, noho izany ny vovo-tany dia misy kalitao tsara kokoa noho ny vovo-tany maina, toy ny fotsifotsy tsara, faritra malama, hakitroky kely, endrika mahazatra, savaivony lehibe -mba refin'ny hateviny sns.
Fampiharana ny Mica amin'ny HDPE
Ny fampidirana mika amin'ny HDPE dia afaka mampihena ny fividianana fitaovana koa, noho izany dia mety amin'ny fanaovana karazana kaontenera rehetra, toy ny fiara mifono solika sy ny sisa. Ny modulus fanetezana tsy fiaramanidina fitambarana HDPE / mica dia mitombo be amin'ny fitomboan'ny tahan'ny sombin-tariby mika, raha mihena kely kosa ny modulus shear tsy fiaramanidina. Ny fitambarana HDPE feno vovoka mika dia manana fananana mekanika feno kokoa. Miaraka amin'ny fitomboan'ny habetsaky ny vovoka mika, nitombo ny tanjaka mihombo, ny tanjaka miondrika ary ny miondrika modulus an'ny fitambarana.
Fampiharana ny Mica Powder ao amin'ny ABS
Ny ABS dia be mpampiasa amin'ny fiara, fifandraisana, elektronika, fiarovam-pirenena ary sehatra hafa. Aorian'ny fampidirana mika amin'ny plastika injeniera ABS dia azo hatsaraina amin'ny ambaratonga samihafa ny tsy fahamendrehana, ny fanoherana ny fiakanjoana ary ny fitoniana simika an'ny ABS. Rehefa ampiana mika 30%, raha ampitahaina amin'ny ABS madio, ny vidin'ny famokarana dia ahena 20% eo ho eo, ary ny tanjaka miondrika sy ny tanjaka mihombo amin'ny fitaovana dia mihatsara hafa. Rehefa 20% ny atin'ny mika, ny modulus miondrika amin'ny fitaovana dia manodidina ny avo roa heny amin'ny ABS madio.
Teo aloha: Vovoka mika synthetic
Manaraka: Vovoka mika calcined